Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0412 tal
Antoka ao amin'i Kristy (1Tes 1 : 5)
Talata 24 Jolay
Vakio ny 1 Tes. 1:5. Ahoana no ahazoantsika antoka fa vita fihavanana amin’Andriamanitra isika? Inona avy ireo porofo telo hita teo amin’ny fiainan’ny Tesalônianina ka nahatonga an’i Paoly hilaza fa vita fihavanana amin’Andriamanitra izy ireo?
Miantomboka amin’ny “Fa” ny and. 5. Ambaran’i Paoly amin’ny tsipiriany ao amin’io andininy io ireo antony maharesy lahatra azy fa “nofidin’” Andriamanitra ny Tesalônianina (1 Tes. 1:4). Tsindriny tsara ihany koa ireo antony hafa mahatonga ny fivavahany ho heniky ny fisaorana (1 Tes. 1:2). Mahafaly an’i Paoly ny porofo mivaingana eo amin’ny fiainan’ny Tesalônianina, izay ahitana fa nanaiky an’Andriamanitra izy ireo ary Andriamanitra kosa nankasitraka azy ireo.
Ny fifaliana noho ny fahitany famantarana hita maso avy ety ivelany mikasika ny toeran’ny Tesalônianina eo anatrehan’ Andriamanitra no anombohan’i Paoly izany andininy izany. Ny faneken’izy ireo ny filazantsara dia tsy fanekena ara-tsaina fotsiny ny fampianarana na ny foto-pampianarana. Hita miharihary eo amin’ny fiainany andavanandro ny fanatrehan’ Andriamanitra sy ny heriny. Teo amin’ny fiainampiangonana isan’andro dia nisy zava-nitranga izay tsy hay hazavaina ankoatra ny maha-fitantanan’Andriamanitra izany. Nisy vavaka maro nivaly ary fiainana maro voaova. Hita taratra teo amin’ny asan’izy ireo ny fananany finoana marina. Ahoana no ahafantaran’ny olona iray fa tena azon-tsapain-tanana eo amin’ny fiainany sy ao amin’ny fiangonany ny fanatrehan’ny Fanahy Masina? Jereo ny Gal. 5:19-23; 1 Kôr. 12:1-11.
Ny “vokatry” ny Fanahy dia porofo mahery vaika mampiseho fa tena miasa tokoa Andriamanitra. Mety hisy ihany ny vokatra tahaka ny fitiavana na ny fifaliana na ny fiadanana, izay mety ho sandoka ihany. Fa eo amin’ireo fifanolanana mitranga matetika ao am-piangonana no ahitana ny tena izy. Rehefa misy tokoa ny fanatrehan’ny Fanahy Masina, dia misy zavatra izay tsy hain’ny olombelona mpanota atao kanefa manjary hainy. Tsapan’ny Kristianina àry fa manjary tiany ny manao asa fanasoavana feno halemem-panahy, izay zavatra tsy nataony akory teo aloha. Porofo marobe no hitan’i Paoly mikasika ny fiovan’ny fiainan’ny Tesalônianina noho ny hery mahagagan’ny Fanahy.
Ho an’i Paoly, ny porofo fara-tampony maneho fa efa nifidy ny Tesalônianina Andriamanitra, dia ny faharesen-dahatra lalina sy ny toky ananany ao anatin’izy ireo hoe marina ny filazantsara ary tena misy eo amin’ny fiainany tokoa Andriamanitra. Na dia tsy voatery ho marina foana isaky ny tarehin-javatra miseho aza anefa ny faharesendahatra tahaka izany, dia mazàna no manaraka ny filazantsara marina hatrany ny fahatokiana be fa vita fihavanana amin’Andriamanitra isika. Manao ahoana ny toky anananao mikasika ny famonjena anao? Eo amin’ny inona anefa no tsy maintsy iorenan’izany toky izany?